पराजय – ६ - Online Majdoor
पराजय – ६
“भन, मैले आफूले आफैलाई कसरी सजाय दिनसक्छु ?” मोरोजकाले आफ्नो कुरा जारी राख्यो । उसको स्वरमा अझै पनि त्यही पीडा थियो । अहिले ऊ झन् दृढताका साथ बोलिरहेको थियो । तर, उसमा अब पहिलेजस्तो निष्कपटता थिएन । “म त आफ्ना खनिकहरूसित मात्र वाचा गर्नसक्छु । यसलाई म कहिल्यै तोड्नेछैन… ।”
“अनि तिमीले आफ्नो वचन तोड्यौ भने ?” लेभिनसनले केरकारको स्वरमा सोध्यो ।
“म आफ्नो वाचामा पक्का रहनेछु ।” मोरोजकाले मुख मिलाउँदै र किसानहरूको उपस्थिति अनुभव गर्दै भन्यो ।
“पक्का रहेनौ भने ?”
“रहिन भने आफूखुसी गर्नू… मलाई गोलीले उडाइदिनू… ।”
“हो, त्यतिखेर हामीले तिमीलाई गोलीले उडाइदिनेछौँ !” दुबोभले कडा हुँदै भन्यो । उसका आँखा अहिले क्रोधले होइन, बरु स्नेहले चम्किरहेका थिए र तिनमा मुस्कान छचल्किरहेको थियो ।
“भोभो, अब अर्थोक भन्न र सुन्न बाँकी रहेन !” बेञ्चमा बसेका छापामारहरू चिच्याए ।
“कुरा यत्ति थियो,” लामो बैठकको समाप्तिमा चैनको सास फेर्दै किसानहरूले भने, “फाल्टु विषय, वर्षैभरि गन्थन गर्न पुग्ने भयो ।”
“त्यसो भए यही हो हाम्रो निर्णय ? अरू सुझाव त छैन ?”
“अब त टुङ्ग्याउँछौ कि !” छापामारहरू चिच्याए । उनीहरू अब गम्भीर र मौन रहेनन् । “यो समग्र विषयले हामी वाक्क भएका छौँ । हामी भोकै पनि छौँ । हाम्रा पेटमा मुसा दगुरिरहेका छन् !”
“हैन पर्ख,” लेभिनसनले आफ्नो हात उठाउँदै र आँखा चिम्सा पार्दै भन्यो “एउटा विषय त हामीले किनार लगायौँ, तर अर्को विषय अझै हामीले किनार लगाउनु छ ।”
“अब के बाँकी रह्यो ?”
“मेरो विचारमा हामीले एउटा प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ ।” उसले आफ्नो चारैतिर हे¥यो । “हामीले एकजना मन्त्री किन नबनाउने ?” ऊ प्रसन्न मुद्रामा फिस्स हाँस्यो । “सिस्किन यता आऊ, लेख त – फौजी कारबाही नहुँदा यताउता हिँडडुल गर्नुको साटो छोटो समयकै लागि भए पनि किसानहरूलाई मद्दत गरिनेछ भन्ने निर्णय भयो… ।” ऊ यति आत्मविश्वासका साथ बोलिरहेको थियो मानौँ आफ्ना मान्छेहरूले किसानहरूलाई मद्दत गर्नेछन् भन्नेमा ऊ ढुक्क थियो ।
“तर हामीले मद्दत मागेका छैनौँ !” एकजना किसान चिच्यायो ।
“कुरो नमिल्ला जस्तो छ,” लेभिनसनले सोच्यो ।
“चुप लाग बुझ्यौ !” अरू किसानहरूले उसको कुरा काटे, “पूरा कुरा सुन । गर्न देऊ उनीहरूलाई काम । काम गर्दैमा उनीहरूका हातखुट्टा गल्ने छैनन् ।”
“र रियाबेत्सलाई विशेष सहयोग गरिनेछ… ।”
“विशेष सहयोग किन ?” किसानहरू आवेगमा आएर कुर्लिए, “के उसले धेरै ग¥हौँ काम गर्छ र ? प्रधानको काम जसले पनि गर्नसक्छ । यो कुनै अप्ठेरो काम त हैन… ।”
“भयो, भयो ! हामी तयार छौँ… । लेखिहाल !”
छापामारहरू आफ्नो स्थानबाट उठे र आफ्ना कमान्डरतिर धेरै ध्यान नदिइकन खुट्टा बजार्दै बाहिरिए ।
“ए, भान्या !” एउटा लामो कपाल पालेको र चुच्चे नाक भएको व्यक्ति मोरोजकातिर लम्कियो र उसलाई ढोकातिर घिसार्न थाल्यो । यसले गर्दा उसको जुत्ताको सोल घिसारियो । “मेरो प्यारो, मेरो बच्चो, सुँगुर भनाउँदो !…” उसले नाक फुल्लाउँदै टाउकोबाट टोपी घुमायो र पिँढीमा एउटा हातले मोरोजकालाई च्याप्दै नाच्न थाल्यो ।
“भयो भो,” उसलाई धकेल्दै मोरोजकाले प्रसन्न मुद्रामा भन्यो ।
लेभिनसन र बाक्लानोभ हुइँकिदै बाहिर गए ।
“साँढेजस्तै बलियो छ यो दुबोभ !” बाक्लानोभले उत्तेजनामा हात हल्लाउँदै भनिरहेको थियो । “गोन्चारेन्कोसँग भिडाएमा मजा आउने थियो । कुस्तीमा कसले जित्ला, के छ विचार ?”
आफ्नै विचारहरूमा हराएको लेभिनसनले उसका कुरा सुनेन । सडकको मुलायम र चिसो धुलोमा उनीहरूका खुट्टा धस्सिदै थिए ।
मोरोजका अरूभन्दा पछाडि प¥यो । किसानहरूको अन्तिम जत्था ऊभन्दा अगाडि लाग्यो । उनीहरू अब शान्त, निश्चिन्त स्वरमा कुरा गरिरहेका थिए । मानौँ कामबाट फर्किरहेका हुन्, सभाबाट होइन ।
पहाडी पाखामा बसेका झुप्रोहरूका झ्यालहरू अन्धकारमा चम्किरहेका थिए । मानौँ भोजनका लागि निम्त्याइरहेका हुन् । तुँवालोको पछ्यौरामा लुकेको नदीको कलकल सयौँ बकुल्लाहरूको आवाजजस्तै सुनिँदै थियो ।
“मिश्काले अझैसम्म पानी पिएको छैन,” मोरोजकाले झल्याँस्स सम्झियो । ऊ बिस्तारै आफ्नो पुरानो ढर्रामा फर्किँदै थियो ।
तबेलामा आफ्नो मालिक पसेको चाल पाएर मिश्का सुस्तरी तर रिसले हिनहिनायो । मानौँ सोधिरहेको छ, “हत्तेरीका कहाँ गएका थियौ ?” मोरोजकाले अँध्यारोमा उसको मसिनो जगर छाम्यो र उसलाई बाहिर ल्यायो ।
“ए तँ पनि खुसी छस्,” मिश्काले आफ्नो गालामा धृष्टतापूर्वक रगडिरहेको चिसो थुतुनो हटाउँदै मोरोजकाले भन्यो, “तैँले पनि खालि उटपट्याङमात्र गर्न जान्या छस्, दुवैको भागको गाली चाहिँ मैलेमात्र खानुपर्छ ।”
लेभिनसनको कम्पनीले आराम गरेको चार हप्ताभन्दा बढी बित्यो र यसबीच उसले घोडा, गाडीहरू, भाँडाकुँडा आदि थुपारिसकेको थियो । यिनको वरपर फुटीकौडी नभएका गरिबगुरुवाहरू मडारिइरहन्थे । यिनीहरू अर्को डफ्फाका भगौडाहरू थिए । उनीहरूको शरीरमा चोटपटकबाहेक केही थिएनन् । छापामारहरू सुस्त भइसकेका थिए र चाहिने भन्दा बढ्ता सुतिरहन्थे । कतिसम्म भने पहरा दिने पहरेदारहरू पनि झुलिरहेका हुन्थे ।
लेभिनसनले खतराको खबर पाएको थियो । त्यसकारण ऊ यो बडेमानको जत्थालाई चल्मलाउन हिच्किचाइरहेको थियो । ताजा समाचारहरूले कहिले उसको शङ्कालाई पुष्टि गथ्र्यो भने कहिले तिनलाई हाँस्यास्पद साबित गर्थे । उसले धेरैचोटि आफैलाई चाहिनेभन्दा बढ्ता सतर्क भएकोमा दोष दियो । विशेषगरी जापानीहरूले क्रिलोभ्का छोडेर गए र दर्जनौँ माइलको दूरीसम्म उसका गुप्तचरहरूले शत्रु भेटेनन् भन्ने थाहा पाएपछि उसले आफैलाई रेख लगायो ।
तैपनि स्ताशिन्स्कीबाहेक लेभिनसनको अनिश्चितता अरू कसैले बुझेका थिएनन् । लेभिनसनमा समेत ढुलमुलेपन हुनसक्छ भनेर कम्पनीमा कसैले पनि पत्याउन सक्दैनथ्यो । उसले आफ्ना विचार र भावनाहरू कसैसामु खोल्दैनथ्यो । उसको उत्तर सधैँ ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ मा आउँथ्यो । त्यसैले उसलाई उसको वास्तविक महत्व बुझ्ने दुबोभ, स्ताशिन्स्की र गोन्चारेन्कोजस्ता व्यक्तिले बाहेक सबैले एक विशेष र उत्तम व्यक्ति ठान्थे ।
सबै छापामारहरू र त्यसमा पनि हाउभाउ र अनुहारले कमान्डरजस्तो बन्ने प्रयास गर्ने तन्नेरी बाक्लानोभले यस्तो सोच्ने गर्थे – “निश्चय नै ममा धेरै कमजोरीहरू छन्, सांसारिक हुँ नि, म धेरै कुरा बुझ्दिनँ, अनेक कुरामा आफूलाई नियन्त्रित राख्न सक्दिन, मैले घरमा एकजना… प्रेमिल पत्नी वा दुलही छोडेर आएको छु, उसको लागि मेरो मुटु छट्पटिन्छ, मलाई मीठो र बसाउने खरबुजा वा दूधसित रोटी अथवा साँझ गाउँले मैच्याङहरूलाई मुग्ध पार्ने झिल्के बुट मनपर्छ, तर लेभिनसनलाई ? मान्छे त त्यस्तो पो हुनुपर्छ ! तपाईँ ऊमाथि यस्तो कुनै किसिमको शङ्का गर्न सक्नुहुन्न । उसले सबैथोक बुझ्छ, उसले प्रत्येक काम सही तरिकाले गर्छ, ऊ बाक्लानोभजस्तै केटीहरूको पछाडि दौडिन्न, मोरोजकाले जस्तै खरबुजा चोर्दैन, उसको मनमा खालि एउटै ध्याउन्न हुन्छ – काम, काम र काम । तपाईँ ऊमाथि विश्वास नगर्न सक्नुहुन्न, उसको आदेश नमान्न सक्नुहुन्न, किनभने ऊ एक जिउँदोजाग्दो मान्छे हो !”
लेभिनसन कमान्डर चुनिएको दिनदेखि अर्को रूपमा कसैले कल्पना गर्न सक्दैनथ्यो – सबैलाई कमान्डर हुनु नै उसको एकमात्र विशेषता हो भन्ने लाग्थ्यो । उसले बालापनमा कसरी पुरानो फर्निचर बेच्न बुबालाई सघाउँथ्यो, कसरी बुबाले जीवनभर धनी बन्ने सपना देखिरहे, अनि ऊ मुसासँग डराउँथ्यो र उसले राम्ररी सारङ्गी बजाउन जान्दैनथ्यो भन्ने कुरा उनीहरूलाई बताएको हुन्थ्यो भने सबैले त्यसलाई मजाक ठान्ने थिए । तर, लेभिनसनले यी कुराको कहिल्यै चर्चा गर्दैनथ्यो । ऊ मौन रहने खालको व्यक्ति थियो भन्ने पनि होइन । बरु कुरा के थियो भने सबैले उसलाई ‘एक विशेष किसिमको व्यक्ति’ ठान्छन् भन्ने उसलाई थाहा थियो । उसलाई आफ्ना र अरूका कमजोरीहरू थाहा थियो । अरूलाई उनीहरूका कमजोरीहरू महसुस गराएपछि र आफ्ना कमजोरीहरू दबाए वा लुकाएपछि आफू जनताको नेता बन्न सक्छु भन्ने उसलाई विश्वास थियो । त्यसैले आफ्नो नक्कल उतार्ने तन्नेरी बाक्लानोभको उसले कहिल्यै मजाक उडाउन्नथ्यो । बाक्लानोभको उमेरमा ऊ आफैले पनि शिक्षकहरूको सिको गर्ने गथ्र्यो किनभने अहिले बाक्लानोभले आफूलाई मानेजस्तै उसले शिक्षकलाई असल मान्छे मान्ने गथ्र्यो । उमेर बढ्दै गएपछि उसले पहिले सोचेजस्तो आफ्ना गुरु उत्तम व्यक्ति रहेनछन् भन्ने थाहा पायो, तर ऊ उनीप्रति सदा कृतज्ञ रह्यो ।
बाक्लानोभले उसको हाउभाउको मात्र सिको गर्दैनथ्यो बरु जीवनका उसका समस्त अनुभवबाट पनि सिक्थ्यो । उसको लड्ने, काम गर्ने, व्यवहार गर्ने तरिका आत्मसात पनि गथ्र्यो । समयसँगै यो बाहिरी हाउभाउ लुप्त हुनेछन्, तब लेभिनसनको अनुभव बाक्लानोभकै अनुभवले समृद्ध बनेर नौला लेभिनसन र बाक्लानोभसम्म पुग्नेछन् भन्ने लेभिनसनलाई थाहा थियो । ऊ यसलाई महत्वपूर्ण र आवश्यक ठान्थ्यो ।
अगस्टको आरम्भमा एउटा झरी परेको रातमा अबेलातिर छापामार सेनाको चीफ–अफ–स्टाफ बुढो सुखोभेइ–कोभतुनकहाँबाट एउटा रिले रिसल्ला कुनै सन्देश लिएर आयो । बुढो सुखोभेइ–कोभतुनले जापानीहरूले मुख्य छापामार फौज रहेको अनुचिनोमा हमला गरेका छन्, इजभेस्तकोभायानिर घमासान युद्ध भएको छ, सयौँ छापामारहरूलाई यातना दिएर मारिएको छ र ऊ आफै गोली लागेर घाइते भई शिकारीहरूको एउटा शरदकालीन अड्डामा लुकेको छ र आफूलाई धेरै दिन बाँच्ने आशा छैन भनी लेखेको थियो ।
यो पराजयको हल्ला आगोजस्तै मैदानभरि फैलियो । यो खबर ल्याउने पहिलो व्यक्ति त्यही सन्देशवाहक थियो । रिलेको प्रत्येक रिसल्लाले छापामार आन्दोलनको सुरुदेखि अहिलेसम्म योभन्दा भयावह खबर कसैले बोकेको थिएन भनी महसुस ग¥यो । उनीहरूका बाक्ला जगरसितका घोडासमेत त्राहिमाम भए । आफ्ना दाँत देखाएर, हिलाम्य र उदास गाउँले सडकहरूमा एउटा गाउँदेखि अर्को गाउँ हुँदै तिनीहरू होसचेत हराएझैँ आफ्ना खुरले हिलो छ्याप्दै तेज दौडिन्थे ।
लेभिनसनले साढे बाह्र बजे खबर पायो र आधा घण्टापछि सइस मेतेलित्साको कमानमा रहेको रिसल्ला पल्टन क्रिलोभ्कालाई पछाडि छोडेर सिखोते–अलिनमा फैलेका सानातिना गोरेटाहरूको बाटो हुँदै पङ्खाको आकारमा फैलियो । उनीहरूको उद्देश्य खतराको समाचार स्वियागिनो सैनिक क्षेत्रका डफ्फाहरूसम्म पु¥याउनु थियो ।
विभिन्न डफ्फाहरूबाट समाचार जम्मा गर्न लेभिनसनलाई चार दिन लाग्यो । उसको दिमाग कुनै पनि बेला अझ विनाशकारी खबर सुन्ने प्रतीक्षामा रहेझैँ एकएक जाँचपड्ताल गर्दै तनावमा पथ्र्यो । तर, मानिसहरूसँग कुरा गर्ने बेला भने उसले आफ्नो अघिको गम्भीरता कायम राख्थ्यो । उसका कतै हराएजस्तै निला आँखा सदाझैँ अहिले पनि खिसी गर्ने बेला चिम्सा हुन्थे र बाक्लानोभसँग ‘उही मैली मारुस्या’ को कुरा उप्काएर जिस्किन्थ्यो । सिस्किनले एकचोटि साहस ग¥यो र आत्तिँदै लेभिनसनले किन कुनै कदम चालेको छैन भनी माग राख्यो । यो सुनेर लेभिनसनसले नम्रतापूर्वक त्यस ठिटाको टाउकोमा थपथपायो र यो कुनै केटाकेटी खेल होइन भन्यो । आफूले विषयलाई राम्ररी बुझेको छु, यी घटना कसरी हुन्छन्, अगाडि गएर यिनले कस्तो रूप लिन्छन्, यो कुनै भयानक वा असाधारण कुरा होइन र आफूले धेरै पहिले नै बचाउको लागि एउटा अचूक योजना तयार गरेको छु भनी देखाउनु नै लेभिनसनको समग्र व्यवहारको उद्देश्य हुन्थ्यो ।
वास्तवमा उसले कुनै योजना नबनाएको मात्र होइन, बरु ऊ एकदम अल्मलिएको थियो । उसको अवस्था स्कूलको त्यो बालकको जस्तो थियो जसलाई उभ्याएर धेरै कुरा अज्ञात नै रहेको हिसाब गर्न दिइएको छ । ऊ सहरबाट समाचार आउने बाटो हेर्दै थियो । छापामार कनुनिकोभ त्यो भयावह खबर आउनुभन्दा एक साताअघि सहर गएको थियो ।
कनुनिकोभ खबर आएको पाँच दिनपछि फक्र्यो । ऊ थाकेको र भोको थियो । उसको दाह्री बढेको थियो । तर, थियो त ऊ उही रातो कपाल भएको र नसमातिने केटो । ऊ दुवै अर्थमा उत्तिकै नसप्रिने खालको थियो ।
“सहरमा धरपकड भएको छ र क्रेइसेलमेन कारागारमा छ,” उसले आफ्नो बाहुलाबाट जुवाडेहरूले जस्तै फ्याट्ट दुई चिठी निकाल्दै र ओठबाट मुस्काउँदै भन्यो । ऊ रत्तिभर खुसी थिएन, तर नमुस्काई ऊ बोल्न पनि सक्दैनथ्यो ।
“जापानीहरू भ्लादिमिरो–अलेक्जान्द्रोभ्स्कोए र ओल्गामा ओर्लिसकेका छन् । सुचान क्षेत्रमा हाम्रा सबै साथी हारिसकेका छन् । सारा खेल चौपट भयो । लौ, चुरोट पिऊ,” यति भनेर उसले लेभिनसनतिर एउटा सुनौलो फिल्टरसितको चुरोट बढायो ।
लेभिनसनले खामतिर आँखा दौडायो, एउटालाई आफ्नो खल्तीमा कोच्यो र अर्को चाहिँ खोल्यो । चिठीले कनुनिकोभको रिपोर्ट पुष्टि ग¥यो । अदालती भाषा र उपरी हार्दिकतापछाडि हार र असमर्थताको तीतोपन स्पष्ट झल्किरहेको थियो ।
“सडेको समाचार छ है ।” कनुनिकोभले सहानुभूति देखाउँदै सोध्यो ।
“हो । यो कसले लेख्यो, सेदिखले ?”
कनुनिकोभले सकारर्दै मुन्टो हल्लायो ।
“प्रस्टै देखिन्छ, उसले हरेक कुरा बुँदा बनाएर भन्छ ।” लेभिनसनले ‘भाग ४ ः वर्तमान काम’ माथि औँला चाल्दै भन्यो । उसले चुरोट सुँघ्यो । “सडेको सुर्ती रहेछ, हैन ? सलाई देऊ त । आफ्नो मुख बन्द राखेकै राम्रो… जापानीहरू ओर्लेको र अरू कुराबारे पनि… । मेरो लागि पाइप किनेर ल्यायौ ?” । कनुनिकोभले पाइप किन्न नसकेको सफाइ दिन थाल्दा ऊतिर ध्यानै नदिई लेभिनसनले आफ्ना आँखा फेरि चिठीमा गाड्यो ।
‘वर्तमान काम’ शीर्षकमा पाँचवटा बुँदा थिए । तीमध्ये चारवटा बुँदा लेभिनसनलाई अव्यवहारिक लाग्यो । पाँचौँ बुँदा यसप्रकार थियो :
“छापामार दस्ताको नेतृत्वसँग यसबेला माग गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा वा जसरी हुन्छ हासिल गर्नैपर्ने कुरा भनेको साना तर असरदार र अनुशासनबद्ध लडाकु दस्ता दुरुस्त राखून् भन्ने हो । त्यसको वरिपरि पछि… ।”
“बाक्लानोभ र क्वाटर–मास्टरलाई बोलाऊ !” लेभिनसनले एकाएक गर्जिँदै भन्यो ।
लडाकु दस्ता ‘पछि’ के होला भन्ने नपढिकन उसले पत्रलाई आफ्नो मोर्चाको ढड्डामा राख्यो । समस्याहरूको जमघटबीच उसले एउटा समस्या स्पष्ट देखिरहेको थियो – ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा’ लाई । लेभिनसनले चुरोटको ठुटो फाल्दै भन्यो र औँलाले टेबलमा ताल दिन थाल्यो । ‘लडाकु दस्ता दुरुस्त राखून्’ – उसले कुराको चुरो समाउन सकेन । त्यो उसको दिमागमा चार अमिट शब्दको रूपमा नाचिरहेको थियो । यान्त्रिक ढङ्गले उसले दोस्रो चिठीमा औँला चाल्यो, खाममा हे¥यो । उसलाई सम्झना आयो, यो पत्र उसकी स्वास्नीको हो । “यसलाई पछि हेर्न सकिन्छ,” उसले खामलाई फेरि खल्तीमा राख्दै सोच्यो । “लडाकु दस्ता दुरुस्त राखून् ।”
भारतीय शासकको फासीवादी चरित्र : स्टान स्वामीको हत्या !